उत्तम एन्ड्रोइड फोनहरू: परीक्षण, सुरुवात, अफवाहहरू ... | Androidsis (पृष्ठ) 18)
केही गुगल पिक्सेल and र पिक्सेल X एक्सएल उनीहरूले लिने फोटोहरू भण्डारण गरिरहेका छैनन्
धेरै संख्यामा परीक्षणको बाबजुद पनि निर्माणकर्ताहरूले टर्मिनलमा उनीहरू अघि पुग्नु अघि लिन्छन् ...
नयाँ र आश्चर्यजनक technologies प्रविधिहरू जुनसँग सामसु .ले बजारबाट निशान हटाउनेछ
त्यहाँ technologies प्रविधिहरू छन् जुन ओभरस्याच्युरेट स्मार्टफोन बजारमा प्रकाश बग्नेछ र निचमा समाचार खोज्ने व्यक्तिको मन्न बने।
शाओमी ब्ल्याक शार्क २ को सम्भावित नाम अनावरण गरियो
शाओमी ब्ल्याक शार्क २ सँग पहिले नै आधिकारिक नाम छ। नाम फेला पार्नुहोस् जुन चिनियाँ ब्रान्डको नयाँ गेमि phone फोनमा रहेको छ।
नोकिया X7 अपेक्षा भन्दा फरक नामको साथ अन्तर्राष्ट्रिय मा प्रक्षेपण गर्नेछ
नोकिया X7 अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नोकिया .8.1.१ को रूपमा सुरूवात हुनेछ। ब्रान्डको नयाँ फोन र यसको अन्तर्राष्ट्रिय नामको बारेमा थप फेला पार्नुहोस्।
सामसुले २०१० को सुरूमा एन्ड्रोइड पाई अपडेट जारी गर्नेछ
सामसु अर्को वर्ष एन्ड्रोइड पाईमा अपडेट हुनेछ। फर्मले आफ्नो फोनको लागि यो अपडेट जारी गर्ने मितिको बारेमा बढि पत्ता लगाउनुहोस्।
सामसुले आफ्नो गेमि phone फोन तयार गर्दैछ, नयाँ रिपोर्ट अनुसार
सामसु काम गर्दैछ र गेमरहरूको लागि आगामी फोन तयार गर्दैछ जुन नोभेम्बरको अन्त्यमा प्रस्तुत हुनेछ। हामी तपाईंलाई विस्तार!
एक नोकिया .8.1.१ आउँदैछ: गीकिबेन्च द्वारा लीक स्प्याक्स
नोकिया .8.1.१ स्न्याकड्रैगन 710१० प्रोसेसर, एन्ड्रोइडको पछिल्लो संस्करण र उत्कृष्ट रिम क्षमताको साथ गीकबेंचमा चुहावट भयो। हामी तपाईंलाई विस्तार!
विपक्षले यसको स्मार्टफोन प्रदर्शन टेस्टमा धोका दिन्छ
OPPO प्रदर्शन परीक्षण मा ठगिएको छ। कार्यको बारे बढि जानकारी पाउनुहोस् जुन ब्रान्डले यसको फोनहरूसँग गर्‍यो।
वनप्लसले वनप्लस T टीको प्रस्तुतीकरण मिति परिमार्जन गर्दछ
वनप्लस T टी आधिकारिक रूपमा अक्टोबर २ on मा प्रस्तुत गरिनेछ। ब्रान्डले फाइल गर्ने मिति परिवर्तन गरेको कारणका बारे पत्ता लगाउनुहोस्।
गुगल पिक्सेल of को स्क्रीन एलजी द्वारा निर्मित छ
अचम्म! गुगल पिक्सेल of को स्क्रीन एलजी, दक्षिण कोरियाली बेस्ड कम्पनी द्वारा निर्मित हो। हामी तपाईंलाई विवरणहरू दिन्छौं!
समीक्षा OUKITEL WP2, असभ्य ब्याट्रीको साथ असभ्य एक
हामीले OUKITEL WP2 लाई परिक्षणमा राख्यौं, IP68 प्रमाणपत्र र विशाल १०,००० mAh ब्याट्री सहितको "All-terrain" स्मार्टफोन, यसलाई नछोड्नुहोस्!
Huawei Mate 20 Pro ले AnTuTu मा कुनै पनि Android को तुलनामा उच्च अंक प्राप्त गर्दछ
हुवावे मेट २० प्रो उत्तीर्ण भयो र T०20 के भन्दा बढि अंकहरू आन्टु टुको परीक्षणमा प्राप्त गर्‍यो, जुन एक सबैभन्दा लोकप्रिय बेन्चमार्क हो।
लेनोभो वाच एस र वाच सी: स्टाइलिश वाच र बच्चाहरूको लागि स्मार्ट वाच
लेनोवो वाच एस र वाच सी स्मार्टवाच आधिकारिक हो। यी भर्खरै सुरू गरिएको उपकरणहरूको बारेमा सबै जान्नुहोस्।
हुवावेको फोल्डिंग फोन वास्तविकता हो र २०१ in मा आइपुग्नेछ
हुआवेईका सीईओले पुष्टि गरे कि उनीहरू आफ्नै फोल्डि phone फोनमा काम गर्दैछन् जुन २०१ 2019 मा प्रस्तुत हुनेछ र यो5जी कनेक्टिभिटी हुनेछ।
सामसुले ग्यालेक्सी «सबै स्क्रिन launch लॉन्च गर्‍यो निशान बिना र स्क्रिन मुनि क्यामेराको साथ
यो स्पष्ट छ कि हामी खाचको साथ सामसु phone फोन कहिल्यै देख्ने छैनौं। र जब हामीलाई थाहा छ कि उहाँसँग क्यामेरा पर्दामा राख्नको लागि धेरै प्याटेन्टहरू छन्।
Vivo Z3 आधिकारिक हो: सुविधाहरू, विशिष्टता र मूल्य
Vivo Z3 दुई संस्करणहरूमा आधिकारिक छ: एउटा स्नैपड्रैगन 670० को साथ र अर्को स्न्यापड्रैगन 710१० को साथ। यो नयाँ मध्य-दायराको सबै विवरणहरू फेला पार्नुहोस्।
लेनोभो K5 प्रो र K5s आधिकारिक हो: सुविधाहरू, विशिष्टता र मूल्यहरू
लेनोभो K5 प्रो र K5s आधिकारिक रूपमा जारी गरियो। ब्राण्डको यी नयाँ टर्मिनलहरूका सबै सुविधाहरू, विनिर्देशहरू र मूल्यहरू जान्नुहोस्।
लेनोभो S5 प्रो अब आधिकारिक छ। सबै नयाँ सुविधाहरू, टेक्निकल विशिष्टताहरू र यो नयाँ मध्य-दायराको मूल्य जान्नुहोस्।
ग्यालक्सी S10 को स्क्रिन मुनि फिंगरप्रिन्ट सेन्सर बाँकी भन्दा फरक छ
सामसु'sको ग्यालक्सी एस १० को स्क्रिनमुनिको फिंगरप्रिन्ट सेन्सर ह्वावे जस्ता अन्य कम्पनीहरूले यसको मेट २० प्रोमा प्रयोग गरेको भन्दा फरक छ।
OnePlus 6T एन्ड्रोइड पाईको साथ आउँनेछ
वनप्लस T टी एन्ड्रोइड पाईको साथ आउँछ। ब्रान्डको उच्च-अन्त अपरेटिंग सिस्टम संस्करणको बारेमा थप फेला पार्नुहोस्।
EMUI 9.0 बीटा अब नौ Huawei र ऑनर मोडेलहरूको लागि उपलब्ध छ
हुवावेले EMUI .9.0 .० एन्ड्रोइड .9.0.० पाईमा आधारित नौ Huawei र Honor फोन मोडेलमा जारी गरेको छ। हामी उनीहरूलाई के भन्छौं!
शाओमी मी मिक्स २ एस एन्ड्रोइड पाईमा अपडेट हुन लागेको छ
शाओमी मी मिक्स २ एस एन्ड्रोइड पाई प्राप्त गर्ने एसियाली कम्पनीको पहिलो टर्मिनल हुनेछ, र यसले आउने दिनमा यस्तो गर्नेछ।
सामसुले एन्ड्रोइड पाई बीटा प्रोग्राम खोल्न तयारी गर्दछ
कोरियाली कम्पनी सामसुले एन्ड्रोइड पाई बीटा कार्यक्रमको ढोका खोल्न तयारी गर्दछ
सेप्टेम्बर २०१ 10 को १० सब भन्दा शक्तिशाली फोनहरू, एन्टु बेन्चमार्कका अनुसार
नोकिया X7 (.7.1.१ प्लस) आधिकारिक रूपमा प्रस्तुत भइसकेको छ
नोकिया X7: निर्दिष्टीकरण, मूल्य र आधिकारिक सुरुवात। ब्रान्डबाट आधिकारिक रूपमा प्रस्तुत नोकिया 7.1.१ प्लसको बारेमा थप फेला पार्नुहोस्।
ओरेन्जको साथ Huawei मेट २० रिजर्व गर्नुहोस् र Huawei वाच GT नि: शुल्क पाउनुहोस्
Huawei Mate 20 एक उपहारको रूपमा Huawei वाच GT संग सुन्तलामा उपलब्ध छ। यस प्रबर्धन पत्ता लगाउँनुहोस् नारिजको साथ अक्टुबर 31१ सम्म।
MANN 8S: एक नयाँ उबदार मध्यम दायरा बजारमा हिट
MANN 8S एक रबड मिड-रेंज फोन हो जुन अब बिक्रीको लागि उपलब्ध छ। यसको विशिष्टता र मूल्य जान्नुहोस्।
Huawei Mate 20 र Mate 20 Pro प्रतिस्पर्धा
धेरै महिनाको अफवाह पछि, सामान्य जब हामी उच्च-टर्मिनलको बारेमा कुरा गर्छौं, एशियाई कम्पनीले मेट २० दायरा प्रस्तुत गर्‍यो। एन्ड्रोइड्सिसमा हामी यसलाई बजारमा बाँकी उच्च-अन्तका विकल्पहरूसँग तुलना गर्छौं।
Huawei Mate 20X: Huawei गेमि smartphone स्मार्टफोन
हुआवे मेट २० एक्स: विशिष्टता, मूल्य र सुरुवात। नयाँ प्रस्तुत हुवावे गेमि smartphone स्मार्टफोनको बारेमा अझ बढि पत्ता लगाउनुहोस्।
हुवावे मेट २० आरएस पोर्श डिजाइन: मोबाइलले लक्जरी बनायो
हुवावे मेट २० आरएस पोर्श डिजाइन: निर्दिष्टीकरण र मूल्य। पहिले नै प्रस्तुत गरिएको Huawei को उच्च-अन्तको यस संस्करणको बारेमा थप फेला पार्नुहोस्।
नयाँ Huawei वाच जीटी संग एन्ड्रोइड वेयर बिर्सनुहोस् जुन जीपीएस र हार्टबीट सेन्सर प्रयोग गरीएको छैन भने ब्याट्री जीवनको दुई हप्ता सम्म पुग्छ।
हुवावे मेट २० र मेट २० प्रो: विवरण, मूल्य र सुरुवात। ब्रान्डको नयाँ उच्च-एंड फोनहरूको बारेमा थप फेला पार्नुहोस्।
शाओमी ब्ल्याक शार्क २ को प्रस्तुतीकरण मिति आधिकारिक हो। चिनियाँ ब्रान्डको गेमि smartphone स्मार्टफोनको प्रस्तुतीकरण मितिको बारेमा थप फेला पार्नुहोस्।
शाओमी मी मिक्स सँग पहिले नै एक प्रस्तुतीकरण मिति छ
शाओमी मी मिक्स of को प्रस्तुतीकरण मिति पहिले नै आधिकारिक छ। चिनियाँ ब्रान्डको यो उच्च-अन्तको प्रस्तुतीकरण मितिको बारेमा थप फेला पार्नुहोस्।
शाओमी रेडमी नोट Pro प्रो आधिकारिक रूपमा स्पेनमा आइपुगेको छ
शाओमी रेडमी नोट Pro प्रो आधिकारिक रूपमा स्पेनमा सुरू गरिएको छ। स्पेनमा चार क्यामेरा फोनको आगमनको बारेमा अधिक जानकारी लिनुहोस्।
हुवावे एन्जॉय Plus प्लस र मजा म्याक्सको घोषणा गरियो: सुविधाहरू, विशिष्टता र मूल्यहरू
हुवावेले हुवावे एन्जॉई En प्लस र एन्जॉय म्याक्स, दुई नयाँ मध्य-दायरा टर्मिनल घोषणा गरेको छ। तिनीहरूको विशिष्टता र मूल्यहरू जान्नुहोस्।
Nubia X को चिनियाँ फर्म को अर्को प्रमुख फिल्टर को विभिन्न विशेषताओं फ़िल्टर
नुबिया X का धेरै प्राविधिक विवरणहरू हालसालै Geekbenh मा चुहावट भयो। अर्को ZTE सहायक फोनका सुविधाहरूको बारेमा जान्नुहोस्।
पामले आफ्नो एन्ड्रोइड मोबाइल केवल only.3,3 इन्च स्क्रीनको साथ प्रस्तुत गर्दछ
पामको नयाँ एन्ड्रोइड मोबाइल यसको सानो आकार र राम्रोसँग राखिएको सौंदर्यशास्त्रको कारण आकर्षक छ। धेरै अन्य भन्दा फरक एक स्मार्टफोन।
नयाँ Oukitel U23 का सुविधाहरू
एशियाई फर्म ओकिटेल P23 प्रस्तुत गर्ने छ, टर्मिनल जसले मिडियाटेक पी 23 प्रोसेसिंग र पछाडि ग्रेडिएन्टको लागि खडा छ।
ग्यालक्सी नोट ले ब्याट्री लाइफ टेस्टमा आईफोन XS अधिकतम स्वीप गर्दछ
ब्याट्री परीक्षण जसमा ग्यालक्सी नोट9र आईफोन XS अधिकतम गरिएको छ, हामीलाई देखाउनुहोस् कि सामसु Smart स्मार्टफोन सफा विजेता हो।
पोको लन्चरको स्थिर संस्करण अब गुगल प्लेमा उपलब्ध छ
POCO लन्चरको स्थिर संस्करण अब उपलब्ध छ। Play Store मा अब उपलब्ध Pocophone F1 सुरुवातकर्ताका बारे थप जान्नुहोस्।
Huawei मेट 20 प्रस्तुतीकरण कार्यक्रम कसरी पछ्याउने
Huawei Mate 20 को प्रस्तुतीकरण कसरी पछ्याउने। चिनियाँ ब्रान्डको उच्च-अन्तको प्रस्तुतीकरणको बारेमा थप फेला पार्नुहोस्।
HTC को blockchain स्मार्टफोन पहिले नै एक प्रस्तुतिको मिति छ
HTC Exodus पहिले नै आधिकारिक प्रस्तुतीकरण मिति छ। यस महिनाको ब्राण्डको ब्लकचेन फोनको अनावरणका बारे थप जान्नुहोस्।
Xperia XZ2 र XZ2 कम्प्याक्ट एन्ड्रोइड पाई प्राप्त गर्न शुरू
एन्ड्रोइड पाईको साथ, यस्तो देखिन्छ कि Google अन्ततः विखण्ड अन्त्य गर्न चाहान्छ एक पटक र सबैको लागि, वा ...
Huawei Mate 20 Pro को यूरोपमा मूल्य र रिलिज मिति अनावरण गरियो
Huawei Mate 20 Pro को मूल्य र रिलीज मिति फिल्टर गरियो। युरोपमा उच्च-अन्तको मूल्यको बारेमा अधिक जानकारी पाउनुहोस् जुन यो गिरावटमा आइपुग्नेछ।
हो त्यहाँ आउँदै गरेको अत्यावश्यक फोन हुनेछ, र यसले स्वचालित रूपमा सन्देशहरूलाई जवाफ दिनेछ
एन्डी रुबिनको कम्पनीबाट अर्को आवश्यक फोनले काम भइरहेको रिपोर्टहरूको आधारमा स्वचालित रूपमा सन्देशहरूलाई जवाफ दिनेछ।
यस घोषणाको साथ सामसुले नयाँ A9 लाई with क्यामेराको साथ प्रमोट गर्दछ
सामसुले युट्यूबमा ग्यालक्सी ए, को पहिलो विज्ञापन पोस्ट गरेको छ, बजारमा पहिलो स्मार्टफोन cameras क्यामेराले हामीलाई शानदार नतिजा प्रदान गर्दछ।
गुगल पिक्सेल कुनै फ्ल्यास बिना रातको फोटो लिनको लागि सक्षम छ। हामी तपाईलाई यसको पछाडि जादू देखाउँदछौं कम्प्युटेसनल फोटोग्राफी को लागी धन्यवाद।
नोकिया 3.1.१ प्लस आइपुगेको छ: फिनिश कम्पनीबाट नयाँ के हुन्छ भेट्नुहोस्
नोकिया 3.1.१ प्लस अब आधिकारिक छ। कम्पनीको नयाँ टर्मिनलको सबै सुविधाहरू, प्राविधिक विवरणहरू र मूल्यहरू जान्नुहोस्।
पिक्सेल X एक्सएल र यसको छुटाउन योग्य निशान
गुगल पिक्सेल X एक्सएलको नच सफ्टवेयरको साथ छुपाउन सकिन्छ, तर के त्यहाँ यसको लागि कुनै आवश्यकता छ? यदि तपाईं निछा मन पराउनुहुन्न, राम्रो अर्को स्मार्टफोन खरीद गर्नुहोस्।
यदि तपाईं सेल्फीका फ्यान हुनुहुन्छ र तपाईंलाई त्यस्ता फोटोहरू लिन मनपर्छ, गुगल पिक्सेल currently हाल यसका लागि उत्तम फोन हो।
ग्यालक्सी A9 2018: निर्दिष्टीकरण, मूल्य र आधिकारिक सुरुवात। चार रियर क्यामेराको साथ सामसु'sको मध्य-दायरा बारे अधिक जान्नुहोस्।
ओप्पो के १: स्क्रिनमा फिंगरप्रिन्ट रिडरको साथ नयाँ मध्य-दायरा
ओप्पो के १ स्क्रिनमा एकीकृत फिंगरप्रिन्ट रिडरको साथ आधिकारिक हो। यस फोनको सुविधाहरू, टेक्निकल डाटा र मूल्यहरू जान्नुहोस्।
पछिल्लो सिजनको "शीर्ष" स्मार्टफोन अझै राम्रो विकल्प हो
तपाईको स्मार्टफोन नविकरण गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ? के दायरा को नयाँ शीर्ष तपाइँको लागी अनुपलब्ध छ? मध्य-दायराको सट्टा, गत वर्षको शीर्ष एक राम्रो विकल्प हो
सामसु Galaxy ग्यालेक्सी नोट १० हेडफोन ज्याक बिना गर्न सक्दछ
सबै कुराले संकेत गर्दछ कि कोरियाली कम्पनी सामसु itsले यसको अर्को उच्च-टर्मिनलहरूको ज्याक जडान पूर्ण रूपमा गायब बनाउँदछ।
हुआवेले अल्ट्रा-फास्ट चार्जिंगमा सुधारको साथ आफ्ना मोबाइलहरूको लागि लिथियम-सिलिकन ब्याट्रीको घोषणा गर्‍यो
हुवावेले भर्खरै नयाँ प्रकारको ब्याट्री घोषणा गरिसक्यो: लिथियम-सिलिकन। यी वर्तमान लिथियम-आयन भन्दा धेरै राम्रो छन्।
एउटा नयाँ लीकले पुष्टि गर्दछ कि सामसु Galaxy ग्यालक्सी ए9(२०१)) चार रियर क्यामेराको साथ आउन सक्छ
सामसु Galaxy ग्यालेक्सी ए ((२०१)) भोली चार क्यामेरा रिअर फोटोग्राफिक प्रणालीको साथ प्रस्तुत गरिने छ। यस सम्भावनाको बारेमा बढि जान्नुहोस्।
ग्यालक्सी A7 2018 आधिकारिक रूपमा स्पेनमा आइपुग्छ
सामसु Galaxy ग्यालेक्सी A7 2018 आधिकारिक रूपमा स्पेनमा सुरू गरिएको छ। स्पेनमा तीन रियर क्यामेराको साथ मध्य दायरा को आगमन को बारे मा अधिक जानकारी प्राप्त गर्नुहोस्।
गुगल पिक्सेल and र पिक्सेल X एक्सएल, ती कसरी उनीहरूसँग प्रतिस्पर्धाको तुलना गरिन्छ
गुगल पिक्सेल and र पिक्सेल X एक्सएलको प्रक्षेपण पछि, उच्च-अन्तको दायरा विस्तार भएको छ र यो पत्ता लगाउन गाह्रो छ कि कुन टर्मिनल हो जुन हाम्रो आवश्यकता अनुसार उत्तम सूट गर्दछ।
शाओमी मी of को दायरा बेचिएको million मिलियन युनिट भन्दा बढी छ
शाओमी मी 8 बेचेको million मिलियन युनिट भन्दा बढी। विश्वव्यापी रूपमा चिनियाँ ब्रान्डको उच्च-अन्तको बिक्रीको बारेमा थप फेला पार्नुहोस्।
युरोपमा वनप्लस T टी प्रक्षेपण मिति पुष्टि भयो। चिनियाँ ब्रान्डको उच्च-अन्त यूरोपमा कहिले आउने बारेमा जान्नुहोस्।
Honor 8C VMall मा यसको टेक्निकल स्पेसिफिकेशन्स र इमेजको साथ अगाडि देखा पर्दछ। फर्मको अर्को मोबाइलको बारेमा सबै जान्नुहोस्।
Honor Magic2मार्केटमा will० वाटको द्रुत चार्जिंगको साथ हिट हुने छ। यस कन्फर्मेसनको बारेमा बढि जान्नुहोस् फर्मको कार्यकारीले दिएका।
गुगलले आज यसको क्षण लिईएको छ पिक्सेल and र पिक्सेल X एक्सएलको प्रस्तुतिको लागि। दुई फोनहरू जुन कुराको लागि धेरै दिईन्छ र जुन तपाईं अब किन्न सक्नुहुन्छ।
गुगल पिक्सेल of को प्रस्तुतीकरण कार्यक्रम कसरी पछ्याउने
गुगल पिक्सेल presentation प्रस्तुतीकरण कार्यक्रम कहाँ पछ्याउने। यस प्रस्तुतीकरण घटनाको अनुसरण गर्न ठाउँहरू पत्ता लगाउनुहोस्।
नोकिया .7.1.१ प्लसको आधिकारिक प्रस्तुतीकरण मिति पहिले नै छ
नोकिया .7.1.१ प्लस प्रस्तुतीकरण मिति पुष्टि भयो। नोकिया फोन अनावरण हुने मितिको बारेमा बढि पत्ता लगाउनुहोस्।
गेमरहरूको लागि त्यहाँ हुवावे मेट २० एक्स हुनेछ
औपचारिक: गेमरहरूको लागि विशेष Huawei मेट 20X हुनेछ। नयाँ फोनको बारेमा बढि फेला पार्नुहोस् जुन चिनियाँ ब्रान्डले कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्दछ।
ZTE अक्टूबर 18 मा Nubia X को रूपमा Nubia Z31S शुरू गर्नेछ
न्युबिया जेड १S एस नबिया एक्सको रूपमा बजारमा उत्रिनेछ, एक नयाँ आधिकारिक पोस्टरका अनुसार यसले अक्टुबर 18१ को अनावरण हुनेछ भन्ने कुरा पनि प्रकट गर्दछ।
वनप्लसका सीईओले यसलाई स्पष्ट पार्छ: अडियो ज्याक हटाउन गाह्रो निर्णय थियो
पिटर लाउ वनप्लस T टी सुरू गर्न लागेका कम्पनीका सीईओ र संस्थापक हुन्। उनले यो स्पष्ट गरेका छन्: अडियो ज्याक हटाउन सजिलो छैन।
हुवावे मेट २० प्रो यस बर्षको सब भन्दा शक्तिशाली फोन हुनेछ, आन्टुको परीक्षण अनुसार।
Huawei Mate 20 Pro AntuTu मा रेटिंगको साथ स्कोर गरिएको छ जसले यसलाई सबैभन्दा शक्तिशाली Android टर्मिनलको माथि राख्छ। हामी तपाईंलाई विस्तार!
यदि तपाईं आफ्नो सामसु cloud क्लाउड खातामा भण्डार गरिएको डाटा पहुँच गर्न चाहनुहुन्छ भने, तर तपाईंसँग आफ्नो उपकरण छैन, तपाईं वेब सेवा मार्फत त्यसो गर्न सक्नुहुन्छ जुन यसले हामीलाई प्रदान गर्दछ।
वनप्लस T टी आधिकारिक रूपमा October० अक्टूबरमा प्रस्तुत गरिने छ। चिनियाँ ब्रान्डको फोनको प्रस्तुतीकरणको बारेमा थप फेला पार्नुहोस्।
OUKITEL WP1: नयाँ रबड फोनको विवरण। ब्रान्डको नयाँ रबड फोनको बारेमा सबै फेला पार्नुहोस् जुन मार्केटमा छिट्टै हिड्नेछ।
उमिडिगी जेड2प्रो समीक्षा गर्नुहोस्
OnePlus 6T सम्भव रिलीज मिति लीक भयो
OnePlus 6T को सम्भावित सुरूवात मिति देखा पर्‍यो। मिति थाहा पाउनुहोस् कुन चिनियाँ ब्रान्डको नयाँ उच्च-अन्त आइपुग्छ।
Google Pixel3XL यसको प्रस्तुतीकरण अघि बिक्रीमा
पिक्सेल X एक्सएलले यसको प्रस्तुतीकरण अघि ह Hongक Kongमा थाल्छ। फोनको सुरुवातका बारे अगाडि बढि पत्ता लगाउनुहोस्।
Cameras क्यामेराको साथ सामसु'sको पहिलो स्मार्टफोनको विशिष्टताहरू फिल्टर गरिएका छन्
केही वर्ष अघि, कुन निर्माताले क्यामेरामा मेगापिक्सेलको एक ठूलो संख्या थप्यो भनेर हेर्नको दौड ...
सामसु्ग नाफा रेकर्डको पथमा फर्कन्छ
सामसु यसको लागि बर्षको तेस्रो क्वाटरमा स्ट्रटोस्फेरिक नाफाको साथ जाँदैछ। स्क्रिन र मेमोरी बिक्री आंशिक रूपमा दोष हो।
सामसु भारतको प्रीमियम फोन बजारको सब भन्दा ठूलो शेयर संग कम्पनी को रूपमा छ। यस रिपोर्ट को बारे मा अधिक जान्नुहोस्।
Xiaomi Mi A2 मा ब्याट्री खपतको साथ समस्याहरू। तपाईंको फोनको ब्याट्रीबाट अनुभवहरू गल्तीहरूका बारे बढि पत्ता लगाउनुहोस्।
Huawei P20 Pro को क्यामेरा आईफोन XS मध्ये एकले पार गर्न सक्दैन
नयाँ आईफोन XS को क्यामेराले आज Huawei P20 Pro हामीलाई प्रदान गरेको गुणवत्ता भन्दा बढी सफल हुन सकेको छैन
एन्ड्रोइड पाई बीटा यूरोप मा Huawei P20 प्रो पुग्न शुरू
युरोपमा हुवावे पी २० प्रोले एन्ड्रोइड पाई बेटा पाउछ। यस बेटामा फोनहरू अपडेट गर्ने बारेमा बढि फेला पार्नुहोस्।
LG V40 ThinQ अब आधिकारिक छ: पाँच क्यामेराको साथ उच्च-अन्त
LG V40 ThinQ: विशिष्टता, मूल्य र सुरुवात। कोरियाली ब्रान्डको आधिकारिक रूपमा प्रस्तुत गरिएको नयाँ उच्च-अन्तको बारेमा सबै फेला पार्नुहोस्।
सोनी Xperia XA3 को उपस्थिति नयाँ रेन्डर [भिडियो] मा फिल्टर गरियो
Xperia XA3 को डिजाइन नयाँ-360०-डिग्री भिडियोमा फिल्टर गरिएको छ। जापानी घर को अर्को टर्मिनल को उपस्थिति जान्नुहोस्।
शाओमी मी मिक्स of को प्रस्तुतीकरण मिति खुल्यो
हामी शाओमी मी मिक्स of को प्रस्तुतीकरण मिति थाहा पाइसक्यौं। शाओमीको उच्च-अन्त कुन मितिमा आउँछ त्यस मितिको बारेमा थप जान्नुहोस्।
हुवावे मेट २० ले Geekbench मा किरिन 20 980० को साथ देखा पर्दछ
हुवावेको मेट २० ले किकिन 20 .980० को साथ गीकबेन्च बेन्चमार्कमा देखा पर्‍यो। डाटाबेसमा रेकर्ड भएका स्कोरहरू पत्ता लगाउनुहोस्।
OUKITEL C11 प्रो: OUKITEL बाट नयाँ मध्य दायरा
OUKITEL C11 प्रो: नयाँ मध्य-दायरा को विवरण। यसको मध्य-दायराका लागि फर्मको यो नयाँ मोडलको बारेमा थप फेला पार्नुहोस्।
लामो-प्रतीक्षित Honor 8X आउँछ
Honor 8X हिजोदेखि नै स्टोरहरुमा उपलब्ध छ, स्मार्टफोनले मध्य-दायराको मुकुट गर्न बोलाउँदछ (शियाओमीको अनुमति लिएर)। यो एक सुपर बिक्री हुनेछ?
सोनी Xperia L3 लीक साइड फिंगरप्रिन्ट सेन्सर र डुअल क्यामेरा प्रकट गर्दछ
एक भिडियोले सोनीको Xperia L3, सोनीको एक मिड-रेंज फोनको पहिलो डेटा प्रकट गर्दछ जुन धेरै चाँडै आउँनेछ
यसको आधिकारिक छविहरूमा OnePlus 6T को अन्तिम डिजाइनको पुष्टि भयो
OnePlus 6T को डिजाइन यसको नयाँ छविहरूमा पुष्टि भयो। चिनियाँ ब्रान्डको उच्च-अन्त डिजाइनको बारेमा थप फेला पार्नुहोस्।
ग्यालक्सी नोट of को नयाँ एस पेनको रिमोट कन्ट्रोल अन्य अनुप्रयोगहरूसँग उपयुक्त छ
सामसुले घोषणा गरेको छ कि यसले विकासकर्ताहरूलाई एस पेन एसडीकेमा पहुँच गर्न अनुमति दिईन्छ समर्थित अनुप्रयोगहरूको संख्या विस्तार गर्न।
ग्यालक्सी एस १० का तीन क्यामेराको स्पेसिफिकेसन फिल्टर गरिएको छ
के सैमसंग ग्यालेक्सी S10 के पहिलो विनिर्देशहरू पहिले नै चुहावट शुरू भयो
नोकिया .5.1.१ र नोकिया २.१ आधिकारिक रूपमा स्पेनमा सुरू गरिएको छ
नोकिया .5.1.१ र नोकिया २.१ आधिकारिक रूपमा स्पेन आइपुग्छन्। फर्मको दुई नयाँ फोनको सुरुवातको बारेमा थप फेला पार्नुहोस्।
OUKITEL K7 Power: १०,००० mAh ब्याट्रीको नयाँ मोडल
OUKITEL K7 Power: ब्रान्डको नयाँ मध्य-दायरा। चिनियाँ ब्रान्डबाट यो नयाँ मध्य-दायराको बारेमा अझ बढी पत्ता लगाउनुहोस् जुन यस महिना मार्केटमा हिट हुनेछ।
OnePlus 6T प्रयास गर्नुहोस् अरू कसैको लागि नि: शुल्कका लागि
अरू कसैको अगाडि घरमा नि: शुल्क इकाई प्राप्त गर्न कसरी यो वनप्लस T टी परीक्षण प्रोग्राम पहुँच गर्ने सिक्नुहोस्।
सामसु Galaxy ग्यालेक्सी A6s: विशिष्टताहरू टेनामा लीक भयो
सामसु Galaxy ग्यालेक्सी A6s यसको धेरै टेक्निकल स्पेसिफिकेशन्सको साथ टेनामा लीक भएको छ। फर्मले हाम्रो लागि के तयारी गरेको छ पत्ता लगाउनुहोस्।
Huawei Y9 2019: हुआवेईको नयाँ मध्य-दायरा
Huawei Y9 2019: निर्दिष्टीकरण, मूल्य र आधिकारिक सुरुवात। आज प्रस्तुत गरिएको चिनियाँ ब्रान्डबाट नयाँ फोनको बारेमा अधिक जान्नुहोस्।
ZTE Axon9Pro चीन मा अक्टोबर अक्टोबर मा शुरू हुनेछ
जेडटीई एक्सोन mid प्रो चाइनाको बजार अक्टुबरको मध्यमा हिड्नेछ, उही कम्पनीले हालसालै गरेको पुष्टिकरणका अनुसार।
सामसु Galaxy ग्यालेक्सी नोट9प्रमुख क्यामेरा सुधारको साथ अद्यावधिक गरिएको छ
सामसु Galaxy ग्यालेक्सी नोट ले एक नयाँ अपडेट प्राप्त गर्दैछ जुन फोटोग्राफिक सेक्सनमा सुधार प्रदान गर्दछ। पत्ता लगाउनू!
Realme2प्रो उत्कृष्ट मध्यम-दायरा प्रदर्शनको साथ आधिकारिक हो
रियलमे २ प्रो 2..6.3 इन्च एफएचडी + डिस्प्ले, स्न्यापड्रैगन 660०, र अधिकको साथ सुरु गरिएको छ। यस मध्य-दायरा को बारे मा सबै कुरा जान्नुहोस्।
LG V40 Geekbench मा Android .9.0.० पाई बिना देखा पर्छ
LG V40 Geekbench Benchmark मा देखा पर्‍यो यसको धेरै सुविधाहरुको साथ। दक्षिण कोरियाली अर्को फ्ल्यागशिपको बारेमा अधिक जान्नुहोस्।
सामसु Galaxy ग्यालेक्सी J4 + र J6 + स्पेन आइपुग्छ
सामसुले ग्यालेक्सी J4 + र J6 + स्पेनमा सुरू गर्यो। स्पेनमा कोरियाली फर्मबाट दुई नयाँ फोनहरूको आगमनको बारेमा थप जानकारी लिनुहोस्।
सियाओमीले संकेत गर्यो कि यसले phones 699 $ $ भन्दा